Yenza eyakho yamahhashi Drone | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
Yenza eyakho racing drone
Isaka | | drones
I-Las umjaho we-drone Ziya ngokuya zithandwa kakhulu, empeleni, kunemincintiswano eyanda ngokwengeziwe yalolu hlobo lwedivayisi. Lokho kukhuthaze abagijimi be-amateur ukuthi bakhule ngesibalo. Kodwa-ke, ukuthola i-racing drone enhle kungabiza uma sifuna i-Pro, kepha nge-DIY, singazakhela i-racing drone ngokwethu ngentengo eshibhile.
Kulokhu kukhona amathuba amaningi sesivele sikuwebhu, ezinye izifundiso ezisifundisa ukuthi singahlanganisa kanjani i-drone yethu, ezinye ezisikhombisa ukuqhathanisa kwama-drones amahle kakhulu wokugijima, njll. Iqiniso ukuthi amathuba abanzi impela, ungathenga ngisho ne-drone enhle futhi uzilungiselele yona emncintiswaneni, okuyilapho esizogxila khona kule ndatshana ukuze siyenze ibe ngeqiniso ngokwengeziwe.
1 Yini engiyidingayo
2 Izinketho zokwakha i-racing drone:
Kulungile ube nomjaho omuhle wokugijima Kufanele ugxile ikakhulu ezinkambeni ezintathu:
Yiba nokuhle kakhulu uhlelo lokulawula kungenzeka. Ukukwazi ukuphatha i-drone kahle kungenza umehluko phakathi kokuwina noma ukwehlulwa komjaho.
Ezinye izinhlelo zokudlulisa azinayo i- ibanga elide, ngakho-ke uma i-drone ihambela kude singaba yimpumputhe, abanye abanakho ukusebenza okuhle futhi bangadlulisa izithombe ngesikhathi sangempela ezisikiwe noma ezinokubambezeleka, okuzophela ngokuhlolwa okungalungile. Ngakho-ke, ngincoma ukukhetha uhlelo oluhle lokulawula. Uma kungenzeka nge Izibuko ze-FPV ukubona sengathi ubungaphakathi kwe-drone esikhundleni sokusebenzisa izilawuli zama-Smartphones noma izilawuli zesikrini ...
El isikhathi sokuphendula yohlelo lokulawula kufanele lube phansi ngangokunokwenzeka, ukuze sibe nempendulo esheshayo lapho siyilawula. Ukubambezeleka kungaphela nge-drone engalawuleki isikhashana ...
La isilinganiso sokuvuselela ividiyo ye-FPV kufanele ibe phezulu ngangokunokwenzeka. Uma ozimele esikrinini bengabuyekezwa kaningi ngokwanele, noma ngabe konke okunye kushesha kakhulu, uzohlala uthola isithombe esiphelelwe yisikhathi.
Ngaphezu kobubanzi, kunconywa ukuthi Ubuchwepheshe bokuxhumeka kwe-WiFi kuthuthuke kakhulu futhi uma kungenzeka ngebhendi eligcwele elingu-5 Ghz kune-2.4 Ghz. I-2.4 Ghz ingaqhubekela phambili uma kunezingqinamba endleleni, ngoba izinga lokumunca lolu hlobo lwamafrikhthi liphansi kunamaza aphakeme, kepha ngaphandle lapho ngokuvamile kungekho zithiyo futhi ividiyo kufanele idluliswe khona manjalo, kungcono ukuyisebenzisa Amazinga we-IEEE 802.11ac anejubane eliphakeme kanye ne-bandwidth (ubuncane be-802.11n). Ngingeza futhi udaba lwama-antenna ahlanganisiwe, lapho ukumbozwa okungcono kakhulu ...
I-Los motores Futhi zibaluleke kakhulu, ngoba uma singenawo ama-motors anamandla ahambisa i-drone ngokushesha, kuzosiza kakhulu ukuba nohlelo lokulawula oluhamba phambili, abanye bazogcina besinqobile ngejubane. Yize izinjini ezingenamabhulashi zivamile, akufanele uthenge olunye uhlobo lwezimoto ezingezona ezalolu hlobo.
Ekugcineni, esinye isici esibucayi yi- isisindo ne-aerodynamics. Uma sine-drone enesisindo esiphakeme noma i-aerodynamics engakhiyo edala ukudonsa okukhulu noma ukumelana nokuqhubekela phambili, izinjini ezinamandla ngeke zikwazi ukusiza. Ngalesi sizathu, mhlawumbe kufanele ucabange kabusha ukukhanyisa i-drone kuze kube seqophelweni eliphezulu futhi unikeze ngamakhamera amakhulu, izesekeli zangaphandle (kungcono ukuhlanganisa ikhamera ngaphakathi kwe-fairing), bese usebenzisa izinto ezikhanya ngangokunokwenzeka, njenge-carbon fiber.
Manje ake sibone singayakha kanjani i-drone...
Izinketho zokwakha i-racing drone:
Sengivele ngiphawule ukuthi ungaqhubeka ngezindlela ezahlukahlukene. Ngokuya ngamathuba akho noma lokho okudingayo ngempela, ungakwenza ngezindlela eziningi.
Enye yamathuba entofontofo kakhulu, kepha futhi angamnandi kangako kubenzi, yi- thenga umjaho wakho wokugijima. Kepha ngaphakathi kwalokhu futhi singahlukanisa phakathi:
Thenga i-racing drone eyenziwe ngomumo. Le nketho izosebenza kuphela kulabo asebevele bazi ukuthi bangandiza kanjani i-drone ejwayelekile futhi babe nobuchule obanele. Angikukhuthazi oqalayo ukuthenga i-drone yomjaho noma bazogcina beyishayisa ngoshintsho lokuqala ngenxa yejubane eliphezulu abalitholayo. Futhi kusishiya ngamathuba amabili:
I-RTF (Ilungele Ukundiza)i-drone esivele ilungiselelwe ukundiza, okusho ukuthi, iphelele ngokuphelele futhi iyasebenza ukuze ukwazi ukuyikhipha ebhokisini, uyilinganise bese uqala ukuyishayela ngaphandle kokuqhubeka.
Okuhle kakhulu kuma-newbies:
I-Husban X4 H107D
Kuhle kakhulu kochwepheshe:
I-eachine Razer 250
Umgijimi we-Walkera 250
I-Walkera Furious 320
Ukucwiliswa kwe -RC Vortex 250 Pro
I-ARF (Cishe Isilungele Ukundiza): cishe sezikulungele ukundiza, zingama-chassis eza cishe nakho konke futhi adinga kuphela umhlangano othile ukwenza imininingwane ethile ivumelane nomshayeli wendiza. Lokhu kuhle kakhulu kumuntu onolwazi kakhulu noma ophethe ngesandla. Amanye amasethi amahle walolu hlobo angaba:
I-XCSource Combo Kit
I-EMAX Nighthawk 280.
Thenga idrone ejwayelekile bese uyilungisa: singathenga i-drone ejwayelekile, njengaleyo evela ku-Parrot, i-DJI, njll., futhi siyiguqule ngokwethu ukuyenza ikhanyise futhi ibe ngcono ekugijimeni, yize lokhu kungangena engxenyeni elandelayo ...
Zenzele ukuthenga izingxenye ngokwehlukana noma ukuguqula i-drone ekhona ngokuthuthuka ukuyilungiselela umjaho. Kulokhu ungenza okulandelayo:
Yenza idrone kusuka ekuqaleni noma ngosizo lwekhithi ye-ARF:
Uma ukukwenza kusukela ekuqaleni, ungakwazi xhumana nabaqondisi njengalezo zokufundiswa:
Yakha Umjaho wakho Drone
I-DIY FPV Racing Drone
Shintsha i-drone Ukuyiguqula ibe yidrone yomjaho kungenye into kunokukwenza kusuka ekuqaleni noma cishe ekuqaleni. Mhlawumbe le yingxenye ebucayi kakhulu, ngoba kufanele siqiniseke kakhulu ngalokho esikwenzayo ukuze singaguquli idrone esebenzayo ibe yinkunkuma engenamsebenzi. Ezinye izeluleko engizokunika zona ubheka la maphuzu amathathu engiwabalulile ngenhla (sizokhumbula):
Uhlelo lokulawula: uma sine-drone ebizayo, ngeke sibe nenkinga enkulu kulokhu ngaphandle kokubheka izibuko ze-FPV. Kepha uma i-drone ingekho kakhulu maqondana nalokhu, mhlawumbe kufanele sibheke okuthize okungcono noma amasistimu wokukushintsha. Inkinga ngalo mqondo ukuhambisana kwamasekethe we-drone uqobo uma kungenjalo, ngoba bekungeke kuhambisane nohlelo lomuntu wesithathu. Kungakho kubalulekile ukuthi ukhethe isisekelo esihle, idrone enhle esizokwakhela kuyo i-racing drone yethu.
Ama-Motors: Mhlawumbe ama-motors anayo i-drone aseve emahle, futhi mhlawumbe kufanele sidlulele endaweni elandelayo ukuthola isivinini nokuqina okukhulu, kepha esimweni sokuthi awewona ama-motors anamandla, ngincoma ukuthi ucabange ngokuthenga ama-motors wokuncintisana ukuthi kufanele babe nesisindo esiphansi, ukuthembeka, ukusebenza kahle (kulinganiswa ngo-g / W, okungukuthi, ubudlelwane obuphakathi kwesisindo semoto namandla akhiqizwayo), i-motor torque ne-RPM ephezulu, kanye nohlelo olungenamabhulashi esikhundleni sezinto ezixubha . Ukuhleleka, izinjini ezihamba phambili kungaba:
Amandla wokuzilibazisa A2212
Upholi we-AR Drone 2.0 Motor
I-HobbyMate Motor Kit
ICoolplay Syma X5c1 x5c x5
Isisindo ne-aerodynamics: Kufanele ucabange nge-drone cishe njengemoto ye-motorsport, njenge-F1:
Khanyisa i-drone ukususa konke okungabalulekile, njengezisekeli (amakhamera, ukwesekwa, ..), imihlobiso, njll. Ungafaka futhi ipulasitiki engaphandle ngisho ne-chassis yangaphakathi ngesenziwe ngento ekhanyayo efana ne-carbon fiber ongayithola ezitolo ezinjenge-Amazon. Izinjini, uma zisinda futhi zinikeza amandla amancane, kufanele futhi uziqede futhi ubeke endaweni yazo ezinye ezifana nalezi esizibalile ohlwini olwedlule.
I-Aerodynamics. Ngingasusa noma yiziphi izithiyo ezingakhokhisi ezifana namakhamera nezintaba zangaphandle njengalezo ezikwi-DJI Phantoms, phakathi kokunye, bese ngikhetha ukufaka ikhamela elincane, elingasindi eligxile ngaphakathi kokuthwebula okulula kwe-carbon fiber. Izingalo eziya kuma-motors we-quadcopters enye inkinga enkulu, ngoba imvamisa iminyene futhi inokumelana okuningi, nomzimba we-drone nawo. Ngakho-ke ungahle ucabange ngokulungisa kabusha i-fairing entsha ukuze ibe nephrofayili ephansi enokumelana okuncane ukusiza izinjini zisheshe. Ukungeza ubujamo obuqondisiwe kuzosiza, noma kungakhuthazwa yimvelo, ngomumo woqhwaku namaphiko ezinyoni ezisheshayo. Khumbula ukuthi imvelo ihlakaniphile. Ku-F1 lezi zinhlobo zamasu zivame ukusetshenziswa ...
Ukuguquguquka kwemoto: Okuthile engingazange ngiphawule ngakho futhi okubaluleke kakhulu ukuthi zonke izinsimbi zisatshalaliswe kahle kwi-drone. Ukujikeleza nekhamera kufanele kubekwe endaweni emaphakathi ngangokunokwenzeka futhi iphansi, ngaleyo ndlela wehlise iphuzu lamandla adonsela phansi we-drone futhi ukusatshalaliswa kwesisindo kuzoba ngcono. Uma unezingxenye ezithile kolunye uhlangothi nezinye kolunye, umehluko wesisindo ungadala ukuthi i-drone ibhale ngaphezulu kolunye uhlangothi kunolunye, okuguqula ukuphathwa.
Ngiyethemba ngikuqondisile nokuthi le ndatshana ingakwazi yiba wusizo ngalokhu kuzilibazisa ...
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » drones » Yenza eyakho racing drone
I-BC547 transistor: konke odinga ukukwazi
2N2222 transistor: konke odinga ukukwazi